Qodka magangelyodoonka ah ee la siiyey sharci deggenaansho ku meelgaarka ah ee shaqeeya - Migrationsverket
/ Ka shaqeeyn Iswiidhan
/ Sharciga ku meelgaarka magangelyodoonka
Qodka magangelyodoonka ah ee la siiyey sharci deggenaansho ku meelgaarka ah ee shaqeeya
Du som har sökt asyl och som har fått ett tidsbegränsat uppehållstillstånd och arbetar – somaliska
Haddii aad tahay qod magangelyodoon ah oo lagu siiyey sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ah oo aad tahay qof masruufkiisa la soo baxaya waxa xaaladaha qaarkood lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha joogtada ah. Waa muhiim inaad sharciga dheeraysato inta aanu sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ahi kaa dhicin. Si laguu siiyo sharciga deggenaanshaha joogtada ah waa khasab in qofka aad u shaqaysaa uu xafiiska Cahuuraha (Skatteverket) uu u sheego inaad isaga u shaqayso waana inaad shaqada u bilowdo inta aanu sharciga ku meelgaarka ahi kaa dhicin.
Haddii aad tahay qof magangelyodoona oo lagu siiyey sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka waxaad xaq u leedahay inaad shaqayso. Waxay kaloo arrintaasi khusaysaa qofka sharciga ku meelgaarka ah lagu siiyey inuu haysto sababo aad u adag ama jiraan arrimo tiiraanyo leh oo qofkaa haysta, ama aan qofkaa dib wadanka looga masaafurinkarin sababo awgeed. Haddii inta aanu sharcigu kaa dhicin aad codsato in sharciga laguu dheereeyo waxaad xaq u leedahay inaad sii shaqayso ilaa iyo inta ay Hay’adda laanta sodaalku go’aanka ka soo gaarayso. Haddii aad buuxiyo shuruudihii loo baahnaa oo dhan markaa waxa lagu siinayaa sharciga deggenaanshaha joogtada ah.
Waa khasab in qofka shaqada ku siiyey uu xafiiska Cashauuraha soo wargeliyo
Waa qasab in shaqo-bixiyahaada soo ogeysiiyaa Hey’adda canshuuraha[Skatteverket] marka adiga shaqada bilaawdid. Shaqo-bixiyaha aad u shaqeysid baa foom ogeysiin soo buuxin oo wuxuu ku soo qori warbixinta qofka oo sida magaca, ciwaanka iyo xilliga ilaa inta ey shaqadas socon. Haddii aad heleysid ruqsada degnaanshada joogtada waxaa qasab ah in adiga shaqada bilaawday inta uusan dhicin wakhtiga ruqsada degnaanshada ku meelgaarka, iyo waa qasab in shaqo-bixiyahaada soo ogeysiiyay Hey’adda canshuuraha ugu dambeyn inta eysan dhicin ruqsada degnaanshada oo ku meelgaarka.
Hey’adda socdaalka waxey la xiriiri Hey’adda canshuuraha sidey u hubiso haddii shaqo-bixiyahaada soo ogeysiiyay inaa adiga shaqeysid wakhtigii loogu talagalay. Adiga ma noo soo direysid wax cadeyn haddii inaa shaqeysid la soo ogeysiiyay Hey’adda canshuuraha. Haddii shaqo-bixiyahaada uusan soo ogeysiin Hey’adda canshuuraha wakhtigii loogu talagalay Hey’adda socdaalka ma kuu oggolankarto ruqsada degnaanshada joogtada, haddii xita adiga aad wada fulisid shuruudaha kale oo ruqsada lagu helo.
Shaqo-bixiyaha wuxuu isticmaali foomka luqada iswiidhishka lagu dhaho ”Underrättelse – Anställning av utlänning SKV 1160”, siduu u ogeysiiyo Hey’adda canshuuraha qof inuu shaqo siiyay.
Foomkas iyo warbixin kale waxaa ka heli bogga internetka oo Hey’adda canshuuraha (Skatteverket) (oo af iswiidhish)
Shuruudaha ku xiran sharciga deggenaanshaha joogtada ah
Si laguu siiyo sharciga deggenaanshaha joogtada ah waxa loo baahan yahay inaad
adigu haysato sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka sida uu dhigayo sharciga ku meelgaarka ahi
waa inuu adiga ku soo galo dhaqaale kugu filan oo aad isku masruufikartid (waxaad isku xisaabsankartaa dhaqaale kaa soo gala shaqooyin kala duwan iyo/ama haddii aad adigu shirkad leedahay)
shuruudaha shaqadaadu waa inay noqdaan qaar ugu yaraan buuxinaya shuruudaha u yaala shaqada ee heshiiska wadajirka ah ama waxa u caadaha ah xirfadaas ama qaybtaas. Shuruudaha shaqada marka laga reebo mushahaarada aad qaadanaysao waa inay xitaa la socdaan caymisyada kalena.
waa inaad haysato shaqo joogto ah ama aad ugu yaraan haysato shaqo laba sanadood ah
qofka shaqo bixiyaha ahi waa inuu xafiiska Cahuuraha soo wargeliyey inaad adigu shaqaynayso maalinta ugu dambaysa ee sharcigaaga deggenaanshaha ku meelgaarka ahi uu kaa dhacyo
waxaad keensankartaa liisan khaas ah, kaar aqoonsi ah ama oggolaansho si aad shaqadaada u qabsatid haddii ay shaqadu kaaga baahato
waxaad dhammaysankartaa waxbarashada dugsiga sare ama waxbarasho u dhiganta oo loogu talagalay dadka ajaanibka haddii ay da’daadu ka yartahay 25 sannadood.
Waa in aanay shaqadaadu ahayn mid ay deeqaha dawladu kabato, tusaale in qof shirkad lihi uu dawlada lacagta shaqadaada qayb ka qaato.
Ka akhriso shuruudaha looga baahan yahay qofka adiga ku shaqaalaynaya/shaqo bixiyaha (oo af ingiriis)
Haddii aad adigu iska leedahay shirkad kuu gaar ah waxa lagaaga baahan yahay inaad haysato raasamaal kugu filan si ay shirkadu kuugu socoto waana inaad ugu yaraan laba sannadood aad masruufikaaga kula soo bixikartid.
Ka akhriso waxa loo baahan yahay si laguu siiyo sharciga deggenaanshaha haddii aad shrikad leedahay (oo af ingiriis)
Codso inta aanu sharciga deggenaanshuhu kaa dhicin
Waa muhiim inaad sharciga deggenaanshaha dheeraysato inta aanu kaadhici, laakiin ha codsanin sadex bilood kahor. Haddii aanad sharciga dheeraysanin inta aanu kaa dhicin markaa xaq uma lihid inaad shaqayso inta go’aan lagaa gaarayo, waxaad markaa halis u tahay inaan lagu siinin dheefaha qaarkood, tusaale lacagta dib u dejinta, lacagta kaalmada ardayda la siiyo ama lacagta gunnada waaldika la siiyo.
Hayädda laanta socdaalku waxay go’aanka ku saabsan sharciga joogtada ah ka gaarikartaa ugu soo horayn maalinta ugu dambaysa ee uu sharciga deggenaanshaha ku meelgaarka ahi ku egyahay.
Haddii aanad buuxin shuruudihii sharciga deggenaanshaha joogtada ah sababtuna ay tahay adigoo shaqeeya ama shirkad leh waxa laguu sii dheeraynayaa sharcigaagii ku meelgaarka ahaa haddii aad weli magangelyo u baahan tahay.
Ka akhriso sida aad u codsanayso marka aad sharciga dheeraysanayso sababtoo ah waxaad u baahan tahay magangelyo (oo af ingiriis)
Magangelyodoon oo helay shaqo
Sharciga ku meelgaarka magangelyodoonka